ညီရဲသစ်: အမှောင်ထဲက သူစိမ်းတစ်ယောက်
Posted by ညီရဲသစ် at 17:52
ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) 25 July 2012 at 19:20
ဒါဟာ တကယ်တော့ ငွေကြေးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ အလွယ် သတ်မှတ်ပြောလို့ရပေမယ့် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓါတ် မခိုင်ကျည်မှုပါပဲ။ မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ ပေါ်ပင်ငွေရတဲ့အလုပ်ကို လုပ်တာကိုမပြောချင်ပေမယ့် အနောက်က ထပ်ပါလာတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ စိတ်အားနည်းတာကြောင့် ဖြစ်ရတာတွေပဲ..
ညီလင်းသစ် 25 July 2012 at 19:22
ကျပ်တည်းလာတဲ့ စီးပွားရေး သံသရာထဲမှာ အမြန်ကြီးပွားဖို့ ကြံကြရင်းနဲ့ အလွယ်လမ်းကို လိုက်မိကြတဲ့ လူငယ်တွေ ဘယ်လောက်တောင် များနေခဲ့ ပြီလဲ မသိဘူး၊ ဒီလိုနဲ့ပဲ သူငယ်ချင်းတွေ အကြားက ရိုးသား၊ ဖြူစင်မှုတွေကို ပြန်မတွေ့နိုင်တော့ဘူး ထင်ပါရဲ့ဗျာ...။
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် 25 July 2012 at 21:09
ငွေကြေးရယ် အောင်မြင်မှု့ဒဏ်ကို မခံနိုင်တာပါပဲလေ ။သူ့မှာ ပိုင်ဆိုင်တာတွေများလာပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ရိုးသားပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြည့်နဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေကတော့ တဖြေးဖြေးနဲသွားမှာပါပဲလေ ။
စံပယ်ချို 25 July 2012 at 21:37
စီးပွါးရေးမပြေလည်ရင် ငွေကိုလွယ်လွယ်ရှာတတ်ကြတာ လူငယ်တစ်ချို့ပေါ့နော်
Mary Grace 25 July 2012 at 21:42
ဘုန်းဘုန်းတောက် 25 July 2012 at 21:44
ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားကြောင့် ပြောင်းလဲသွားတာ ဖြစ်ရမယ်။
mstint 25 July 2012 at 23:24
လူ့ရဲ့စိတ်နေ သဘောသဘာဝဟာ ထိန်းကွပ်မှုဉာဏ်နဲ့တားဆီးခြင်းမရှိရင် ဖြတ်လမ်းနည်းကို လိုက်တတ်ကြတယ် မောင်ညီရဲရေ။
သဒ္ဓါလှိုင်း 26 July 2012 at 00:57
တချို့က ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မိမိရဲ့စိတ်အခြေခံအားနည်းတဲ့အတွက် ကောင်းခြင်း ဒါမှမဟုတ် ဆိုးခြင်းဘက်ကို ယိမ်းယိုင်သွားကြတယ်။ သူ့ရဲ့ဘေးက သူချစ်ခင်လေးစားတဲ့သူရဲ့ အပြုအမူ အနေအထိုင် အကျင့်စာရိတ္တတွေက သူ့ကို တစ်ချိန်ချိန်မှာပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ့် သင်ခန်းစာအဖြစ် ပေးခွင့်ရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ.။
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! 26 July 2012 at 03:05
တစ်ကယ်ကို ရင်မောစရာ ဘဝတွေပဲ အကိုရေ....
ချစ်စံအိမ် 26 July 2012 at 08:47
ဖတ်သွားပါတယ် အကိုရေ မြန်မာပြည်ကတော့ပြောကိုမပြောချင်တော့ပါဘူး:)
မြတ်ပန်းနွယ် (Myat Pan Nwe) 26 July 2012 at 09:50
အခုခေတ်မှာ အဲသည်လို လူငယ်တွေ သိပ်ကို များလာတယ်..
အလွယ်လမ်းကိုလိုက်၊ အပျော်အပါးလိုက်စားပြီး အကောင်းအဆိုး နဲ့ အမှန်အမှားကို မခွဲခြား နိုင်ကြတော့ဘူး။
San San Htun 26 July 2012 at 10:24
လူငယ်တွေရဲ့ရိုးသား ကြိုးစားမှုတွေကို အလွယ်လမ်းတွေက ဖျက်ဆီးနေတယ်..လူငယ်တွေအတွက် အလုပ်အကိုင်၊ ပညာ ကောင်းမွန်တဲ့ အခွင့်အရေးရဖို့လိုအပ်ပါတယ်..တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေကြောင့်ပါ..
Unknown 26 July 2012 at 15:21
မောင်မျိုး 26 July 2012 at 16:57
နှမြောစရာပဲ ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ပြောင်းလဲခြင်းများစွာနဲ့ ပျောက်ရှသွားချင်ပေါ့ နေရတော့ခက်မယ်နော့် သူ့ကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ကလည်းမလွယ်တဲ့အခြေ သူ့အနေထားကို လက်ခံပေးဖို့ ကိုယ့်ထင်မြင်ချင်တွေ ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ကလည်းမလွယ်တော့ ဒွိဟ စိတ်ကလေးဖြစ်နေမှာ ။
မောင်မောင် ဟာ အပြစ်သားတစ်ယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးလေ မိမိရဲ့ ဘ၀ပေးအခြေနေကို ငုံစိတ်ကလေးရှိနေနိုင်တဲ့အခြေနေမို့ လောကစည်းစိမ်းတွေကို ခံစားရတော့ သူမိန့်မူးနေမိမှာ အမှန် ပြီးတော့ သူ ပျော်ဝင်မှန်းမသိ ပျော်ဝင်နေလိမ့်မယ် ။ တစ်နေ့ တော့ သူ့အနားမှာ မိတ်ဆွေစစ်တွေ ရှားပါးသွားရင်တော့ သူ့သူငယ်ချင်းကို သူ အောက်မေ့ သတိရအုံးမယ်ထင်ပါတယ် ။ အဲ့အချိန်ကျ သူ့ကို အားပေးနှစ်သိမ့်နိုင်ဖို့ လက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားပေ်ါ့ဗျာ ။
သူငယ်ချင်းဆိုတာ သူ့ရဲ့ ကောင်းကွက် ဆိုးကွက်တွေကို သိရှိပြီးနောက်မှာတောင် မပြောင်းလဲပဲ သူ့နား ဆက်ရှိနေသေးတဲ့သူကို ဆိုလိုတာလို့ ကျနော်တော့ ယူဆတယ်ဗျ ။
ပို့စ်ကောင်းလေးပါ သိပ်ခံစားလို့ကောင်းတယ် ။ ကျေးဇူး ။
...အလင်းစက်များ 28 July 2012 at 01:38
ဂလိုပဲဗျ။ ကျနော်ကျ ကိုယ်တိုင် ကျပျောက်သွားတာ။ အဲ့လို။ ကိုယ့်ထက်ဆိုးတဲ့ ကျပျောက်တဲ့လူတွေ မြင်မှ ပြန်အဖတ်ဆယ်လိုက်နိုင်တာ။ စနစ်ဆိုးကြောင့်ပါပဲ။ (ကျနော်လည်း ဒါကိုပဲ အပစ်တင်နေကျမို့ လား မသိ) ဟီး
သိ င်္ဂါရ 28 July 2012 at 13:07
သူငယ်ချင်းတွေ ... သူငယ်ချင်း တချို့တွေ အကြောင်း ပြန်တွေးမိဖြစ်တယ် ... ။ ကျွန်တော့် ရဲ့ တချို့သော နှစ်ကာလများဆီလည်း ပြန်ပြီး အမှတ်ရဖြစ်တယ် ...
pigpig 1 August 2012 at 02:37
ပတ်သက်ဖူးတဲ့ သူတွေအများကြီး ကျပျောက်သွားဖူးတယ်
နေ၀သန် 1 August 2012 at 12:40
ငွေ၊ ငွေ၊ငွေ.. ငွေကြောင့်သာလူတွေ ပျက်စီးရတာပါ။ နောက်ဆုံးစာကြောင်းလေးဟာ တကယ်ကို ထိမိပါပေတယ်။ အလုပ်သင့်ဆုံးလုပ်ရပ်တစ်ခုကို ဖော်ညွှန်းသွားခဲ့နိုင်တယ်။ ကောင်းတယ်ဗျာ။ မဖတ်ရတာကြာနေပြီ..း))
8Yar 23 August 2012 at 13:30
ကောင်းတယ်ဗျာ။ ခံစားချက်ကို နားလည်ပါတယ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့ ဝေဒနာကို...